Xubnaha Jamhuuriga Ee Ka Codeeyey Trump Oo Loo Hanjabay |
Mrs Cheney oo katirsan xisbiga, kana mid ah xildhibaanada aqalka wakiilada, aabaheedna uu horay usoo noqday madaxweyne ku xigeenkii George W Bush ayaa sidookale kamid ah dadka wajahaya inay iscasilaan.
“Meelna uma socdo, codkana wuxuu ahaa mid ku saabsan sharafkeena”, ayay tiri Cheney oo cadaadis kala kullantay xildhibaanada kale ee ay isku xisbiga yihiin ee katirsan Kongreska.
Xilli dhawaan lagu wado in xilka madaxweynenimo loo caleemo saaro Biden ayaa FBI-da Mareykanka waxay ka digtay suurtagalnimada ah in markale ay dhacaan dibadbaxyo rabshado wato, gaar ahaan caasimadda Washington.
Afhayeenka Kongreska, Nancy Pelosi ayaa maalin kahor si rasmi ah ugu dhawaaqday in markale aqalka ay hogaamiso uu soo jeediyay in xilka laga qaado madaxweyne Donald Trump, waxaana xil ka qaadistiisa loo gudbinayaa aqalka sare ee Mareykanka.
Xil ka qaadista ay soo jeediyeen aqalka Kongreska ayaa ka duwan tii hore oo markii hore ma aysan jirin xildhibaan katirsan xisbiga madaxweyne Trump oo u codeeyay soo jeedinta xil ka qaadistiisa. Meel marinta arrintan ee aqalka sare ayaa u baahnaan doontaa aqlabiyadda xildhibaanada aqalka sare.
Madaxweyne Trump ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka ee mar labaad lasoo jeediyo in xilka laga qaado kadib markii lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay dadkii weeraray aqalka Capitol.